स्वदेश फिर्ती: सोमबार ६०७ नेपाली स्वदेश फर्किए, कुन देशबाट कति ? – News Np Online
मुख्य पृष्ठ /News/स्वदेश फिर्ती: सोमबार ६०७ नेपाली स्वदेश फर्किए, कुन देशबाट कति ?
सोमबार विभिन्न देशबाट ४ वटा ‘उद्धार’ उडानमार्फत ६०७ जना नेपाली स्वदेश फर्किएका छन् ।
आज फेरी घट्यो सुन चाँदीको भाउ, कतिमा हुँदैछ कारोबार ?
OMG भ’र्खरै आ’यो ए’स्तो भि’डियो फे’सबु’क च’ला’उनु हुन्छ तु’रुन्तै हे’र्नु यो भिडियो जति स’क्दो से’यर गर्नुहोलां